Umhla My Pet » Imfihlelo ngokumanga Great
ukubuyekezwa: Sep. 16 2020 | 2 min ukufunda
Ukuphuzana kumnandi kwaye xa kwenziwe kunene, iintlantsi ziza kubhabha ushiya iqabane engenakuthetha yakho. Kodwa ngaba uthathe njani ukwanga yakho kwinqanaba elilandelayo? ngezantsi, siye obubhenqwe iimfihlelo ngokumanga olukhulu.
imfihlelo #1: ncitha
Ukuthatha ixesha lokuza phambi imilebe itshixa kunceda ukwakha kucingelwa. Nokuba nto bebambene ngezandla, Ukuphulula, okanye ukuhlikihla ikhosi, kumfowunelwa emzimbeni phambi Eyona ukwanga imfihlelo eya kusinceda siqinise angathabatheki ekwabelwana kunye nzulu indibaniselwano yakho.
imfihlelo #2: Phola
Ukuphuzana, nokuba sele wamanga ezilikhulu izihlandlo, kunokuba nzima luvo Amanqwanqwa. Isitshixo lokuphumla. Khumbula ukuba kuphefumlwa enzulu, lula engqondweni yakho, nikholwe kwisiqu.
imfihlelo #3: imilebe
Wenze izinto ezingezizo ukuzanga imilebe yakho. Usana okanye ngobunono ngokuzijoja amaqabane akho Imilebe iya qiniseka ukuba abagxothe uphambene engazinzanga ngokwesondo. Enye indlela iindevu-ezijoliswe kubalekela incam ulwimi lwakho kancinane imilebe yabo. Xa ukwanga wakho athabathe, angafaniyo uxinzelelo kunye nesantya ngokwanga inceda ukudala yimincili njengoko iqabane lakho uya kuyazi into uyeza elilandelayo.
imfihlelo #4: iindlebe, impumlo, Eyes, nentamo
Nangona ukuzanga ludla ingqalelo ngeenxa imilebe ukuba ayikho indawo kuphela ukuba kufuneka ingqalelo. Ukuphuzana namaqabane yakho neendlebe, khangela, impumlo, iinkophe zonke uncedo, bona u kiss esiqhelekileyo kulonwabo uthando. Ukuba ufuna ukuyeka phezulu okwinotshi, zama edlala nezikweko nasendlebeni kunye nentamo. Bendingasoze ezi amabala ethile Yenza iminqweno ezintsha kunye neemvakalelo eziya kongeza angathabatheki kunye nokuqinisa kiss yakho kwakuza.
imfihlelo #5: uvakalelo
Nangona iimfihlelo enokunceda kujika nabani ibe kisser olukhulu, imfihlelo inkulu bonke ubuxoki isimo sakho ngokweemvakalelo yoxhulumaniso kwi neqabane lakho. Ukuze ubone zitaka ngelixa ukuzanga, imiphefumlo yenu kufuneka ukuthetha omnye komnye. Ngokwabelana amabali lichazele neenkumbulo, uloyiko kunye namabhongo, wazithi iimvakalelo zakho oyinyaniso ukubonisa zonke iindlela ukuba ubudlelwane bakho kwinqanaba nzulu. Nangona le intsha, karhulumente ngokweemvakalelo kuzakukwenza ube kwimo, le yenye umngcipheko ukuba iya kuba oko.
Ukwanga yindlela entle yokubonisa umntu wakho ekhethekileyo nje kakhulu indlela ukuthini kuwe. Na ezi mfihlelo, esi senzo olusondeleyo enokuguqula ulwalamano lwakho kuloo uxhulumaniso enzulu ufuna.